Kurumidza kuviga hurukuro muWhatsApp - mazano - teles relay
Kurumidza kuvanza chat muWhatsApp - mazano
Regardez bien! Découvrez comment nettoyer les chaussures en daim…
Iwe haudi kutarisa zvisina kujeka kuwira pane imwe ye WhatsApp yako hurukuro? Tsiki diki inokubvumira kuti uivanze kwenguva pfupi uye nekukurumidza, pasina kuibvisa.
Mukati yemakore mashoma, WhatsApp yakave yakakosha application pane mobile. Pasinei nemushandi chero upi zvake, zvinoita kuti zvive nyore kutumira mameseji, mafoto nemavhidhiyo uye kunyangwe kuita hurukuro dzeboka zviri nyore kupfuura neSMS neMMS, zvese zvemahara nekukurumidza kana uchinge iwe inoshandisa Wi-Fi.Iyo zvekare ndiyo nzira inosarudzika yekutaurirana kwevashandisi vazhinji nhasi, kunze kwenzvimbo dzekudyidzana.
Asi sekutumira meseji, WhatsApp inogona kugamuchira zvakavanzika zvemukati. Uye kunyangwe vari nyanzvi kana vega, dzimwe hurukuro dzinofanira kuramba dzakavanzika. Dambudziko nderekuti, nekushomeka, hurukuro dzako dzese dzazvino dzinoratidzwa zvichitevedzana - kubva pane dzichangobvira kusvika dzechinyakare - kana uchangovhura chishandiso. Uye munhu ari padyo anogona, pakapfupfupfunyuka, ona kuti ndiani wauri kutaura naye, izvo zvinogona kutsamwisa mune mamwe mamiriro…
Neraki, iriko nzira yakapusa yekuvharira kwenguva pfupi hurukuro pasina kuvadzima, kudzivisa zvisaririra: kuchengeta dura.
Ndokumbira utarise: nzira iyi, inoshanda pane zvese zviri zviviri Android uye iOS, haisi vimbiso yakakwana yekuvanzika. Sezvauri kuona, zvinokurumidza kubvunza hurukuro yakachengetwa uye chero munhu anokwanisa kuwana foni yako kwemasekondi mashoma azokwanisa kuwana zviri nyore zvawakavanza. Asi zviri nyore kwazvo kuita uye zvinokuchengetedza iwe zvakanyanyisa kubva pakunyanyisa kuda kutarisa, mukutakura semuenzaniso.
Kwechinguva chengetedza hurukuro
Pane yako mbozhanhare, vhura iyo WhatsApp yekushandisa uye uende kune iyo tebhu Disc. kana isingaratidzwe nekukasira.
Mune runyorwa rwekurukurirano mukufambira mberi, pinda zvinopfuura sekondi imwe pane kutaurirana kwaunoda kuvanza kuisarudza.
Notch inoonekwa pane yemupikicha wako, kuratidza kuti nhaurirano yasarudzwa.
Mubha yekushanda, pamusoro pechidzitiro, tap chiratidzo chekwere nemuseve, kungosara kwematehwe matatu madiki. Iyo nhaurwa yakasarudzwa pakarepo inonyangarika kubva pane iyo chinyorwa: ikozvino yakachengetwa mune zvakavanzika zvekurukurirano.
Dzokorora kushanda kwacho nedzimwe hurukuro dzaunoda kuvanza. Iwe unogona zvakare kuita zvese panguva imwechete, nekusarudza nhaurirano dzinoverengeka usati wadzvanya chiratidzo chekuchengetedza.
Dzosera hurukuro yakachengetwa
Iyo yakavanzika yekutaura haina kubviswa pane yako mbozhanhare: ichangobva yaendeswa kune folda yezvinyorwa zvakachengetedzwa mu WhatsApp. Uye iwe unogona kuita kuti iite zvakare mune runyorwa rwekutaura mukufambira mberi kwazvo nyore.
Dzokera kuDiski tab. WhatsApp uye dzikisa pasi kuzasi mushure mekutaura kwekupedzisira.
Dzvanya kutaurwa Archived (X) - X inoratidza huwandu hwekurukurirano dzakavanzika.
Rondedzero yeakagadziriswa akachengetedzwa inoratidzwa. Iwe unogona kuvabvunza nezvakawanda, nekuvhura ivo pachavo.
Mune irondedzero, pinda zvinopfuura sekondi imwe pane kutaurirana kwaunoda kuti uitezve. Zvekare, cheki chiratidzo chinoratidza kuti nhaurirano yasarudzwa.
Mubha yekushanda, pamusoro pechidzitiro, tap chiratidzo chekwere nemuseve - museve uri kune rumwe rutivi, nguva ino. Iyo nhaurwa yakasarudzwa pakarepo inonyangarika kubva mumatura uye inowanikwa zvakare mune zvinyorwa zvekukurukurirana ikozvino. Ita zvimwe chete nekukurukurirana kupi kwaunoda kudzosera.
Chinyorwa ichi chinogara chichigadziriswa na nyanzvi pasi pe
mirayiridzo of Jean-François Pillou, muvambi weSpecialCaMarche
uye inomiririra director weDigital development yeboka rePiera.
Nyaya iyi yakatanga kutanga TLC
TELES RELAY 21725 Posts 0 mashoko
Suzane Toï Toï: ndiani mumwe wake waaiziva muchikoro chesekondari?
Icho chinonyanya kushamisa "Stranger Zvinhu 4" teaser inoratidza kuti Hopper ichiri mupenyu - BGR
Regardez bien! Découvrez comment nettoyer les chaussures en daim avec cette astuce…